श्री इन्भेष्टमेन्टको ८३% हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » श्री इन्भेष्टमेन्टको ८३% हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने सेयर भर्न ?
काठमाडौं - श्री इन्भेष्टमेन्ट एन्ड फाइनान्सले ८३% हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको छ । यो सेयर माघ १५ गतेदेखि खुल्ला हुने भएको छ । कम्पनीले १०ः८.३ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २८ लाख ६७ हजार २२५.६२ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । यो हकप्रद फागुन २० गतेसम्म भर्न पाइनेछ ।
बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, नारायणचौर, नक्साल काठमाडौं तथा श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंसहित यसका अन्य शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सेयर भर्न सकिनेछ ।
हाल यस फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ३४ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद बिक्रीपछि भने चुक्ता पुँजी ६३ करोड २१ लख ७१ हजार ४३२ रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा फाइनान्सले १ करोड २३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ ६१ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १९२ रुपैयाँ ०४ पैसा छ ।